Ardey ku dhow 16,160 oo maanta Imtixaanka Shahaadiga Fasallada 8-aad iyo 4-aad u fadhiistay deegaanada Puntland. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ardey ku dhow 16,160 oo maanta Imtixaanka Shahaadiga Fasallada 8-aad iyo 4-aad u fadhiistay deegaanada Puntland.
Deegaannada Dowlad Goboleedka Puntland waxaa maanta oo sabti ah kuna beegan 4-ta July 2020 ka bilawday qaadista imtixaanka Shahaadiga ah ee fasalada 8-aad Dugsiga dhexe iyo 4-aad ee Dugsiga sare.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Dowlad Goboleedka Puntland ayaa horay u ballamisay maalintaan in la qaado Imitxaanka Shahaadiga oo dib uga soo dhacay waqti sanadeedkiisa oo ku aadaneed Bishii May, sabab ka dhalatay Cudurka Covid-19.
Ardayda imtixaanka u fariisatay waxa ay gaarayaan 16,160 guud ahaan labada Arday ee kuwa ka gudbaya Dugsiga sare iyo kuwa usoo gudbaayaba sida ay sheegtay Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Puntland.
134-Xaruumd ayaa loo diyaariyay in ay Ardayda ku galaan Imtixaanka, waxaana la geeyay howlwadeeno katirsan Wasaaradda Waxbarashada iyo Askarta loogu talagalay in ay ilaaliyaan xarumahaas.
“Imtixaanka Shahaadiga ahi kaalin mug leh ayuu ka qaataa tayada waxbarashada Puntland guud ahaan, wuxuu abuuray jawi tartan oo u dhexeeya ardayda u diyaargaroobaya imtixaanka, sidoo kale waxaa tartanka qayb wayn ka ah goobaha waxbarashada, maamulayaasha, macallimiinta, waalidiinta, madaxda gobollada, qolo walibana waxa ay rajo wayn ka qabtaa in ay kaalin la taaban karo ka gasho imtixaanka” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Wasaaradda Waxbarashada Puntland.
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlad Goboleedka Puntland ayaa Ardayda u rajeeyay in ay kaalmo wanaagsan ka keenaan Imtixaanka, isaga oo kula dardaarmay in ay ilaaliyaan nidaamka gaarka ah ee loo dajiyay.
Ardey ku dhow 16,160 oo maanta Imtixaanka Shahaadiga Fasallada 8-aad iyo 4-aad u fadhiistay deegaanada Puntland. was last modified: July 4th, 2020 by Admin